Rakhiyeyaasha Qalabka iyo Qalabaynta Bacriminta Qalabka Dabiiciga ah ee Jaban & Warshad | YiZheng
Mashiinka Qalajinta ee Rotary Single Sylinder waxaa si weyn loogu isticmaalaa in lagu qalajiyo qalabka warshadaha sida sibidhka, macdanta, dhismaha, kiimikada, cuntada, bacriminta isku dhafan, iwm.
Muxuu yahay Mashiinka Qalajinta ee Rotary Single Sylinder?
Ku Mashiinka Qalajinta ee Rotary Single Sylinder waa mashiin waxsoosaar oo baaxad weyn oo loo isticmaalo in lagu qalajiyo qaybaha bacriminta ee warshadaha samaynta bacriminta. Waa mid ka mid ah qalabka muhiimka ah. KuMashiinka Qalajinta ee Rotary Single Sylinder waa in lagu qalajiyo qaybaha bacriminta dabiiciga ah oo leh biyo ah 50% ~ 55% ka dib marka la isku daro biyo ka kooban ilaa ≦ 30% si loo buuxiyo heerka bacriminta dabiiciga ah. Markii loo isticmaalo keydinta muddada-dheer ama sida alaabta ceyriinka ah ee loogu sii shaqeeyo, qoyaanka qoyaanka waa inuu ahaadaa ≦ 13%.
Muxuu yahay Mashiinka Qalajinta ee Rotary Single Silinda loo isticmaalo?
Mashiinka Qalajinta ee Rotary Single Sylinder waxaa si weyn loogu isticmaalaa qalajinta nuuradda nuuradda ah, budada dhuxusha, dhagaxa, dhoobada, iwm. Mashiinka Qalajinta waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa qalabka dhismaha, metallurgy, kiimikada, iyo warshadaha sibidhka.
Mabaadi'da Shaqada ee Mashiinka Qalajinta ee Rotary Single Silinda
Qalabka waxaa loo diraa si loo gooyo Mashiinka Qalajinta ee Rotary Single Sylinder by suunka qaada ama wiishka baaldiga. Foostada waxaa lagu rakibay jillaab ilaa qadka jiifka. Qalabku wuxuu foostada ka soo galaa dhinaca sare, hawo kululna waxay foostada ka soo gaashaa dhinaca hoose, qalabka iyo hawo kulul ayaa isku darma. Qalabyadu waxay u aadaan dhinaca hoose cuf isjiidadka marka foostadu rogmato. Qaad qaadayaasha dhinaca hoose ee wiishka foostooyinka kor iyo hoosba si ay u sameeyaan alaab iyo hawo kulul oo gebi ahaanba isku darsanta. Marka waxtarka qalajinta waa la hagaajiyay.
Maxay yihiin astaamaha Mashiinka Qalajiya ee Rotary Single Silylinder?
* Qaab dhismeed macquul ah, been abuur aad u wanaagsan, wax soo saar sare, adeegsi hoose, dhaqaale iyo deegaan, iwm.
* Qaab dhismeedka gaarka ah ee Mashiinka Qalajinta Rotary wuxuu hubiyaa walxaha qoyan ee aan xannibi doonin oo dhajin doonin Mashiinka Qalajinta.
* Mashiinka Qalajinta Rotary wuxuu iska caabin karaa heerkulka sare si uu si dhaqso leh u qalajiyo maaddada una yeesho awood ballaaran.
* Mashiinka Qalajinta Rotary waa fududahay in la shaqeeyo lana ilaaliyo.
* Mashiinka Qalajinta Rotary wuxuu u isticmaali karaa dhuxul, saliid, gaas, biomass shidaal ahaan.
Mashiinka Mashiinka Qalajiya ee Rotary Hal Qalab Muuqaal Video
Xulashada Mashiinka Mashiinka Qalajinta ee Rotary
Tixdan Mashiinka Qalajinta ee Rotary Single Sylinder waxay leeyihiin noocyo kala duwan, oo lagu dooran karo iyadoo loo eegayo wax soo saarka dhabta ah, ama la qaabeeyay.
Xuduudaha ugu muhiimsan ee farsamada waxaa lagu muujiyey jadwalka soo socda:
Hore: Mashiinka Bacriminta Joogtada ah
Xiga: Mashiinka Qaboojinta Drum Rotary
Hordhac Waa maxay Mashiinka Qaboojinta Qulqulka Tirinta? Jiilka cusub ee Mashiinka Qaboojinta Qulqulka Counter-ka ee ay baareen oo ay soo saareen shirkadeena, heerkulka maaddada ka dib qaboojinta ma ahan mid ka sarreysa heerkulka qolka 5 ℃, heerka roobabku ma ahan wax ka yar 3.8%, ee soosaarka noocyo tayo sare leh, sii dheereeya bakhaarka ...